M/weyne Trump oo u magacaabay Brett Kavanaugh inuu ka mid noqdo xeer ilaaliyaasha… – Hagaag.com
M/weyne Trump oo u magacaabay Brett Kavanaugh inuu ka mid noqdo xeer ilaaliyaasha…
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqaan Brett Kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid ah xeer-ilaaliyaasha Maxkamadda Sare ee Mareykanka, si uu u bedello booska uu banneeyay Justice Anthony Kennedy oo howlgab noqday.
wuxuu ku sifeeyay qaadi faqiih ah oo sharaf leh, oo u go,doomay sidii uu ugu adeegi lahaa dadkiisa iyo dalkiisa.
Kavanaugh, ayaa ah 53-jir aad ugu janjeera xisbiga muxaafidka ee uu ka tirsanyahay madaxweynaha. Wuxuu 12-ki sano ee lasoo dhaafay ahaa qaadi heer federaal ah. Gaar ahaan maxkamadda racfaanka ee magaalada Washington DC.
Sidoo kale wuxuu lataliye u soo noqday madaxweynihi hore ee Mareykanka Goerge Bush. Si uu u noqdo mid ka mid ah garsoorayaasha Maxkamdda Sare, wuxuu u baahnaan doonaa in ay ansixiyaan Golaha Senetka Mareykanka.